Alahady 02 Febroary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 02 FEBROARY 2020 - Alahady Fandraisana
“Mahatoky ny Teny Vavolombelon'ny Tompo"
“Mahatoky avokoa ny didiny rehetra" Salamo 111:7b
Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo » androany ary alahady fahaefatra manaraka ny Epifania.
Izao alahady izao no nandraisana an-dRakotonirainy Mendrika Nathan ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Ny Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriantsilavina Nofy no nitarika ny fotoana, ary ny ny litorjia amin’ny endriny voalohany no narahina. Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny Diakona Rabako Miora sy Rabako Tovohery no nitari-bavaka sy namaky ny Teny.
Ny Salamo faha 93 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 35,1-2-3
Nanao ny vavaka fiderana sy fisaorana ny mpitarika avy eo. Noho ny fitiavany sy ny fahatanterahan’ny Teniny ary ny fitahiany no nahavory ny mpianakavin’ny Tompo dia natokana ho fanomezam-boninahitra ny fotoana anio. Nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ho fahalavorarian’ny fotoana
Ny Deotonoromia 6,17 no natolotra ny mpivavaka ho sitrapon’Andriamanitra: « Tandremo tsara ny didin’i Jehovah Andriamanitrareo sy ny teni-vavolombelony ary ny lalàny, izay efa nandidiany anao. » Ny hira FFPM 179,1-4 no nohiraina taorian’izay.
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny hafatr’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana satria be famindram-po ny Tompontsika. Tao anatin’izany vavaka izany no nanaovana ny vavaka mangina.T aorian’ny vavaka dia noventesina ny FFPM 95,3
Ny teny famelan-keloka notononina dia nalaina tao amin’ny 1 Timoty 1,14 “Fa be indrindra ny fahasoavan’ny Tompontsika tamin’ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin’i Kristy Jesosy ” Noho ny anaran’i Jesosy Kristy dia voavela ny helokareo. Taorian’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 28
Ho fanambarana ny finoana miaraka amin’ireo voavela heloka rehetra dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany.
Andriamy Guy no tompon’andraikitra tamin’ny Dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Talohan’ny tantara fohy dia nanao vavaka ny mpitarika mba hahazoan’ny mpihaino tsara ny hafatra.
Ny tantaran’i Daily no natolotra ho an’ny Sekoly Alahady. Daily dia mpanompon’Andriamanitra iray izay nahay niara-monina tamin’ny olona.
Rehefa tonga tamin’ny fotoana tokony hanambadiany izy dia naniry ny hanana tokantrano sambatra. Naharitra fotoana maro anefa ny naha mpitovo azy ary dia nataon’ny fiaraha-monina resaka izy sady naratsian’izy ireo no noendrikendrehany ho mpaka vadin’olona noho izy sariaka. Tsy nahakivy azy izany fa nankininy tamin’ny Tompo ny fiainany ary nahery nivavaka izy. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia lehilahy efa somary bebe taona no naka vady azy. Vao mainka nataon’ny olona resaka Daily. Tsy vitan’izany fa tsy nety nahazo zanaka indray izy mivady. Ny tanàna nonenan’izy ireto dia somary alavitry ny renivohitra ka tsy nisy toeram-pitsaboana hany ka tsy maintsy mandeha alavitra ireo mpiteraka sy marary rehefa mila dokotera, ny lalana anefa sady ratsy no lavitra. Rehefa nitondra vohoka I Daily dia nosokafana teo an-tanàna ny toeram-pitsaboana ka tsy sahirana I Daily nanao ny fanaraha-maso ny fitondrany vohoka sy ny fiterahany. Nampalahelo anefa fa rehefa teraka ilay zazalahy dia nisy fahasembanana. Tsy nahakivy an’i Daily izany tranga izany satria izy dia mpanompo mametraka ny fiainany amin’Andriamanitra. Tonga ary ny ady lehibe. Voatery nanao miaramila avokoa ny vatan-dehilahy rehetra. Ny vady aman-janak’I Daily irery no tsy nalefa tany an’ady satria efa nahazo taona ny vadiny, ny zanany kosa dia tsy mahafeno ny fepetra ahafahana mirotsaka miaramila. Ny vadin’i Daily sy ny zanany irery sisa no lehilahy teo an-tanàna. Ary ireo lasa dia tsy tafaverina intsony. Izany no lahatr’Andriamanitra.“Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza.” Jeremia 29,11a
Taorian’izay dia nasaina nifampirary soa ny mpianakavin’ny Tompo tamin’ ny alalan’io teny iomanao hoe “Fa ny Tompo mahalala ny hevitra iheverany anao, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza”
Taorian’izay dia nanao ny anjara hirany ny taninketsa.
Ny mpitantsoratra Razafimaharo Mamy no nitondra izany.
Nanambara ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM fa mivoaka ny carte mirakitra MP3 an’ireo hiran’ny FJKM
Nanao antso amin’ ireo manan-talenta ihany koa izy mba hifanome tanana amin’ny fanomezana aina ny hira Zafindraony.
Nambara ny fotoana amin’ity herinandro ity izay tsy misy fiovany
Misy ny fiarahaban’ireo sampana sy sampan’asa nahatratra ny taona vaovao
Nambara ihany koa ny fiofanan’ny Diakona sy loholona izay tontosaina eto amin’ny tanànan’ny fiangonana ny 8 Febroary 2020
Ho fanohizana ny fanamboarana ny Orga dia mivory ny Komitin’ny Orgue ny talata ho avy izao amin’ny 12ora sy sasany.
Nangataka fitondrana am-bavaka ny fiofanan’ny Diakona sy Loholona ny Mpitandrina
Nentanina ireo Mpandray izay manana faniriana hianatra SETELA
TSINGERIN’ANDRO NAHATERAHANA VOLANA JANOARY
Teo am-pamaranana dia noraisin-tanana sy narabaina ireo rehetra nankalaza ny tsingerin-taonany tamin’ny volana Janoary. “Fa izay tahian’I Jehovah dia voatahy mandrakizay” Izany no tenin’Andriamanitra nentina nirary soa ireo mpianakavin’ny Tompo teraka volana Janoary.
Ireto avy ny hira nagatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana:
FFPM 8 / FFPM 537/ FFPM 14,1 / FFPM 2,1 / FFPM 480,1-2 / FFPM 480 3/ FFPM 460, 1-2 / Misaotra Anao izahay. Tao anatin’izany dia nisy ny fangataham-bavaka momba ny tombon’andro,ny fahasalamana, ny fianarana, ny asa fanorenana, valim-bavaka, vavaka ho an’ny faniriana tsara, vavaka ho an’ny Malagasy, ny raharaham-pitsarana, ny fampaherezana, ny vavaka ho an’ny fiainam-panompoana.
Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny hira FFPM 512,5
Ny hira FFPM 205,1-2-5 no natao mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny Diakona ao amin’ny vaomieran’ny Fifandraisana Rabako Tovohery sy rabato Miora no niandraikitra izany. Tao amin’ny vavaka dia nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina mba ahafahana mandray tsara ny Teny sy hahaizana mampiatra izany amin’ny fiainana. Ny Perikopa androany dia Salamo 111, 1-8, Jaona1, 1-8, I Jaona 1, 1 – 4
Ny Salamo 111,7b no nangalan’ny Mpitandrina Raharijaona ny toriteny.
“Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo.” No lohahevitra izao volana izao. Mahatoky izany Teny vavolombelona izany satria voalohany: sady Marina izy no mahitsy, faharoa: sady masina izy no madio, farany: sady maharitra mandrakizay izany Teny izany no Mahakasika ny fiainana iray manontolo
Fahiny dia ny zanak’Israely no nofidian’Andriamanitra ampitondraina ny teniny sy ho vavolombelony amin’izao tontolo izao. Ankehitriny kosa dia isika Kristiana no zanak’Israely vaovao. Ho setrin’izany fitiavan’Andriamanitra antsika izany dia rariny raha hankalaza sy hanome voninahitra Azy isika.
Jaona no mpianatr’i Jesoa zandriny indrindra sy tian’i Jesoa indrindra. Ny antony nanoratan’I Jaona Soratra Masina dia satria nisy ny fampianaran-diso. Tian’Andriamanitra hanana anjara ao amin’I Jesoa isika, izany no antony anehoany ny Teny vavolombelony antsika sy anomezany antsika ny Zanany.
Azo antoka ny famonjena ho an’ny Kristiana. Mila fikolokoloana izany antoka izany mba tsy ho voarombaka. Ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia mitovy sata amin’ny Apostoly. Mila omanina ny fo sy ny saina ary ny fanahy ho mendrika ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Izany fampianaran-diso izany dia mandresy lahatra ny olona hitsipaka ny maha Andriamanitra an’I Jesoa. Jaona dia manambara ny maha-Andriamanitra an’I Jesoa.
Mba ahatanteraka ny teny fikasana dia tsy miova Andriamanitra ary maharitra mandrakizay ny Teny vavolombelony. Ny Epistilin’I Jaona dia mitaona antsika hahalala ny Fiainana Mandrakizay ao amin’I Jesoa Kristy.
Rehefa nihemotra niala Taminy ireo mpianatr’i Jesoa dia nanontany ireo mpianany 12 lahy ny Tompo hoe “Ianareo koa ve te hiala amiko” dia hoy Petera “Ho any amin’iza moa izahay, Ianao no manana ny fiainana mandrakizay.” Jesoa no fiainana mandrakizay.
Aza miala amin’ny Tenin’Andriamanitra fa mitoera amin’ny teniny dia hivoaka ho mpandresy ianao.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.
Nisaorana ny Tompo satria noho ny fitiavany dia azontsika antoka ny fiainana mandrakizay. Nentina am-bavaka ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Notrotroina am-bavaka ihany koa ireo mpitondra fiangonana sy mpitory teny. Nangatahina ny Tompo mba hampitoetra ny Teny any anatin’ny mpanompony mba hiorenany amin’ny finoana sy fanantenana.
Nentina am-bavaka ny zanaky ny fitandremana manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana sy ny firenena. Nentina am-bavaka ireo Sampana manao fankalazana amin’ity 2020 ity. Nentina am-bavaka ny tontolo andron’ny Diakona sy Loholona, ny Kristiana manam-paniriana hanolo-tena hianatra Setela, Nentina am-bavaka ihany koa ireo asa rehetra sy fandaharam-potoana rehetra tanterahina amin’ity volana Febroary ity. Nentina am-bavaka ireo sahirana, ireo tra-boina, ireo mana-manjo, ireo tratry ny tsy fidiny, ireo tsy salama, ireo tratry ny tsindry hazolena ary ireo manana hataka manokana sy nanatontosa raki-pahasoavana sy voady masina. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.
Fandraisana an’I Rakotonirainy Mendrika Nathan ho Mpandray ny fanasan’ny Tompo ny asa vavolombelona anio. Natomboka tamin’ny firedonana ny FFPM 446,1-2 izany. Taorian’ny fanambarany ny faneken’ny Mpandray dia nentina am-bavaka ny mpandray vaovao.
Ny hira ffpm 461: 1 nohiraina mialohan’ny namakiana ny tondronzotra sy nanolorana ny tsodrano ary ny andininy faha-6 amin’io hira io ihany no natao teo am-pamaranana ny tapany voalohany amin’ny fanompoam-pivavahana. Nisy ny fandraisana ny fanasan’ny tompo avy eo.
Nitendry ny orga: Rajaofetra John notronin’ny mpitendrin’ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno.
Tompon’andraikitry ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Vola sy ny Vaomieran’ny Aim6panahy ary ny Vaomieran’ny Fifandraisana.